သားယောက်ျားလေးဖွားမြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / သားယောက်ျားလေးဖွားမြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Apann Pyay 11:22 AM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
မိဘတွေတော်တော်များများက မိန်းကလေးထက်စာရင် သားယောက်ျားလေးကို ပိုပြီးလိုချင်ကြတယ်။ သားယောက်ျားလေးရှိအောင်လည်း ကြိုးစားလို့ရပါတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
၁) မဂဏန်းနေ့(ဥပမာ ၁၊၃၊၅၊၇၊….) တွေမှာလိင်ဆက်ဆံပါ။ အဲ့ဒီနေ့တွေမှာ မိန်းကလေးသုတ်တွေက ယောက်ျားလေးသုတ်တွေထက်ပိုပြီးအားကောင်းတယ်လို့ဆိုစမှတ်ပြုကြတယ်။ ဒါဟာ ယောက်ျားလေးရဖို့ အခွင့်အလမ်းကိုတိုးစေမှာပါ။
၂) မိဘနှစ်ယောက်လုံးက အာဟာရမျှတအောင်စားပေးရပါမယ်။ အနီရောင်ရှိတဲ့အသားတွေ၊ ငါး၊ ဆားများတဲ့အစာ စတာတွေကိုစားသုံးပေးရပါမယ်။ Alkaline အများကြီးပါတဲ့အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားလေးရဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
၃) အက်ဆစ်ပါတဲ့အစားအစာတွေကို ရှောင်ရှားပေးရပါမယ်။
၄) ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စွာစားသောက်ရပါမယ်။ အစားများများစားတာက မိခင်ကိုအားတိုးစေပြီး ဠ ယောက်ျားလေးရဖို့ အခွင့်အလမ်းများစေပါတယ်။
၅)လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ အတွင်းထိထိုးထည့်ပြီးဆက်ဆံတာက သုတ်ကောင်တွေကို အမအင်္ဂါအတွင်းထဲကိုအသေအချာဝင်ရောက်စေပြီး ယောက်ျားလေးရဖို့ အခွင့်အလမ်းများစေပါတယ်။
မိဘတှတေျောတျောမြားမြားက မိနျးကလေးထကျစာရငျ သားယောကျြားလေးကို ပိုပွီးလိုခငျြကွတယျ။ သားယောကျြားလေးရှိအောငျလညျး ကွိုးစားလို့ရပါတဲ့နညျးလမျးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။
၁) မဂဏနျးနေ့(ဥပမာ ၁၊၃၊၅၊၇၊….) တှမှောလိငျဆကျဆံပါ။ အဲ့ဒီနတှေ့မှော မိနျးကလေးသုတျတှကေ ယောကျြားလေးသုတျတှထေကျပိုပွီးအားကောငျးတယျလို့ဆိုစမှတျပွုကွတယျ။ ဒါဟာ ယောကျြားလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျးကိုတိုးစမှောပါ။
၂) မိဘနှဈယောကျလုံးက အာဟာရမြှတအောငျစားပေးရပါမယျ။ အနီရောငျရှိတဲ့အသားတှေ၊ ငါး၊ ဆားမြားတဲ့အစာ စတာတှကေိုစားသုံးပေးရပါမယျ။ Alkaline အမြားကွီးပါတဲ့အစားအစာတှကေို စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ ယောကျြားလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားပါတယျ။
၃) အကျဆဈပါတဲ့အစားအစာတှကေို ရှောငျရှားပေးရပါမယျ။
၄) ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျစှာစားသောကျရပါမယျ။ အစားမြားမြားစားတာက မိခငျကိုအားတိုးစပွေီး ဠ ယောကျြားလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားစပေါတယျ။
၅)လိငျဆကျဆံတဲ့အခြိနျမှာ အတှငျးထိထိုးထညျ့ပွီးဆကျဆံတာက သုတျကောငျတှကေို အမအင်ျဂါအတှငျးထဲကိုအသအေခြာဝငျရောကျစပွေီး ယောကျြားလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားစပေါတယျ။